Ilay mpanao sary sokitra, Matthew Simmonds, dia nandrafitra ny maritrano anatiny amin'ny vato marbra sy vato kely | Famoronana an-tserasera
Matthew simmonds dia mpanakanto monina any Copenhagen izay manamboatra basilicas kely, rotunda, andry, amin'ny marbra sy vato. Nanomboka nanjary nalaza tamin'ny asa-tanany nahavariana izy tamin'ny 2014, ary ny teknika faran'izay mahay dia mitambatra amin'ny fahaizana azony mpanao sary sokitra matihanina ary ny fahalianany mitohy amin'ny tranobe vato masina hatramin'ny fahazazany. Miaraka amin'ny fitandremana sy ny fandanjana dia mampiasa ny fitsipika mahazatra momba ny maritrano izy hijerena ireo fiheverana misy ny lohahevitra endrika sary sokitra samihafa.
Simmonds sombiny manomboka amin'ny lava-bato maoderina, toerana ara-pivavahana majika samihafa (katedraly, fiangonana), mahafinaritra Tsanganana grika, romana, sns. Manandrana ny fitaovany izy, manisy sokitra amin'ny alokaloka isan-karazany sy firafitry ny akora mineraly fanao. Ny trano na ny rafitra rehetra dia mafy tratry ny fiovan'ny fomba fijery, ary ny zoro mazava isan-karazany izay azo aseho mba hampisehoana antsipiriany samihafa hamaritana ireo toerana kely.
Misy zavatra mampitony ny sary sokitra ao aminy, izay milaza fa afaka mahita mazava kokoa ny toe-javatra isika rehefa mijery azy ireo amin'ny fomba fijery hafa. Na mety hoe ireo maritrano tsy misy intsony toa fialofana azo antoka sy malefaka miorina amin'ny vatolampy mideza izy ireo, izay mitovy amin'ny vazy miafina masina, izay ahafahanao mihemotra ao anatiny hahazoana fampiononana mangina. Matthew Simmonds dia mamerina maneho ireo karazana habaka arakaraka ny fijanonany maniry hanome azy, izay mazàna dia mitaky fahatsapana ho bitika mahafaty, ka miteraka mahatsiaro ho voaro kokoa, fa tsy latsa-danja kokoa koa, izay mametra-panontaniana momba ny fifandraisana misy eo amin'ny natiora sy ny fandraisana andraikitra ataon'ny olombelona. Avelanay ianao a Video taorian'ny fahavitan'ny sary sokitra marbra nataon'ny artista Matthew Simmonds tao Pietrasanta any Italia, tanàna nahaterahan'i Michelangelo.
Matthew simmonds nahazo diplaoma tamim-boninahitra ao amin'ny BA amin'ny Tantara ara-javakanto avy amin'ny Oniversiten'i East Anglia tamin'ny 1984, ny lehibeny dia manam-pahaizana manokana amin'ny zavakanto sy ny maritrano amin'ny vanim-potoana medieval. Rehefa avy niasa nandritra ny taona maro toy ny saryHatramin'ny 1991 dia nianatra teknikan'ny maritrano sokitra vato tao amin'ny Oniversite Weymouth izy. Niasa tamin'ny famerenana amin'ny laoniny ny maro amin'ireo tsangambato lehibe any Angletera izy, ao anatin'ireny sanganasa ireny no anisan'ny lehibe indrindra Westminster Abbey, ary ny Katedraly Salisbury sy Ely. Tamin'ny taona 1997 dia nifindra tany Pietrasanta, Italia izy, ary nianatra manokana haingo kanto tamin'ny fampiasana marbra. Nahazo ny fankasitrahana voalohany ho mpanao sary sokitra izy tamin'ny taona 1999 taorian'ny nahazoany ny voalohany mari-pankasitrahana amin'ny simposium iraisam-pirenena momba ny sary sokitra any Verona. Nanomboka tamin'izay dia nandray anjara tamin'ny fivoriambe sokitra isan-karazany eran'izao tontolo izao izy ary nampiranty tany UK, Italia, Alemana, Danemarka, Sina, Aostralia ary Etazonia. Tamin'ny 2014 dia nifindra niaraka tamin'ny fianakaviany tany Copenhagen, toerana onenany izy ary miasa ankehitriny. .
Manao lalao habaka maritrano amin'ny ambaratonga kely, misokatra ny vato matanjaka misy ny sokitra manambara tontolo anaty, miova arakaraka ny fomba fijery rehefa miova ianao, ary ny hazavana dia mitana andraikitra lehibe amin'ny famaritana ireo sary sokitra. Nahazo aingam-panahy nandritra ny androm-piainana lava tamin'ny fahalianan'ny trano vato, ary miorina amin'ny fahaiza-manao nianarana ho mpanefy vato aritrano, no entina any Simmonds ny asa. Miorina amin'ny fiteny ofisialy sy ny filozofia amin'ny firafitry ny sanganasa, dia mitrandraka izy io olana tsara sy ratsy, la maha-zava-dehibe ny mazava sy ny maizina, sy ny fifandraisana misy eo amin'ny natiora sy ny asan'ny olombelona.
Mahavariana ny asa, ny antsipiriany rehetra ary misy valiny mahavariana. Heveriko fa vitsy ny mpanao sokitra vato ankehitriny. Manantena aho fa tianao ilay lahatsoratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny mpanao sary sokitra, Matthew Simmonds, dia nanisy sary sokitra anatiny avy amin'ny vato marbra sy vato kely